သင့်ချစ်သူအတွက် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Photography » သင့်ချစ်သူအတွက်
Posted by manawphyulay on Oct 31, 2011 in Photography | 21 comments
ခုတစ်လော သီတင်းကျွတ်လို့လားမပြောတတ်ဘူး။ ခြံထဲမှာစိုက်ထားတဲ့ပန်းလေးတွေကလည်း သိနေတဲ့အလားပဲ အပြိုင်အဆိုင် ဖူးပွင့်ကုန်ကြတယ်။ တစ်နေ့ တစ်နေ့ ပန်းတွေကြည့်နေရတာနဲ့တင် ကြည်နူးမိတယ်။ ခုတော့ အားလုံးကို ကြည့်ဖို့ မျှဝေတာတောင် ကွန်နက်ရှင်က လက်မခံဘူး။ တင်ပြီးတာတောင် မရောက်လို့ပြန်လုပ်ရတယ်။
သီတင်းကျွတ်ပြီဆိုတော့လည်း ပန်းလေးတွေက မနေနိုင်ကြဘူးပေါ့နော်.... အပြိုင်အဆိုင် ပွင့်ကုန်ကြတာလေ
ဓာတ်ပုံရိုက်ရတာလည်း အမောပါပဲ။ မင်္ဂလာဆောင်တွေကလည်း ဖိတ်တာတွေများတော့ ပန်းပန်ချင်တဲ့အိမ်နီးနားချင်းတွေအတွက်တော့ အဆင်ပြေကြတာပေါ့နော်။ အိမ်မှာ နည်းနည်းလာတောင်းလိုက်နဲ့ အဆင်ကိုပြေလို့။ အိမ်မှာကတော့ ရေလောင်းပြီး ပန်းပင်တွေကို ကြည့်မ၀ရှုမ၀ပါပဲ။
ဒန်းစီးလေဒီတဲ့လေ ပန်းလေးတွေလည်း အပြိုင်အဆိုင်ပွင့်ကြပြန်ရော
အများကြီးပဲ တင်လိုက်တာ အဆင်မပြေဘူး။ ရသလောက်ပဲယူသွားကြတော့နော်။ မနော နောက်နေ့မှ ထပ်ရိုက်လာခဲ့ပေးမယ်သိလား။
လာပြန်ပြီ တဲ့ ၊ ဘယ်ကနေ ဘယ်လို လဲ သိချင်စမ်းပါ၏
ရွာထဲက မမ နဲ့ညီမလေးတွေ အတွက်ပဲလား။ အပြင်ယူသွားလို့ရဘူးလားဟင်?
မမ.. မနောဆီ.. တားတား မင်္ဂလာဆောင်ရင်
မပေးရင် ရွာထဲမှာ မမ.. မနော ကပ်စီးနည်းတယ်လို့
သစ်ခွပန်းတွေကတော့ ရှယ်ပဲ … ပုံတင်ရင်းတခါထဲ အိမ်လိပ်စာပါ ထည့်လိုက်တာမဟုတ်ဘူး မင်္ဂလာဆောင်တွေ အမှီ ရိုက်စားလုပ်လျှင် ကွက်တိပဲ .. :D
နောက်ဆို အစ်မတော်ဆီမှာ သင်ထားမှ….သင်ထားမှ
သင်ပေးဦးမှာ….. နှပ်ချေးငပိလုပ်နည်း ၊ တစ်စေ့က နှစ်စေ့ခွာနည်း (အကြွေစေ့ပြောပါဒယ် :D ) မီးပူမတိုက်ပဲ အကျီ င်္ဝတ်နည်း ၊ ကြောင်အစာကျွေးနည်း … ဟီးဟီး … တခြားဟာတွေ အများရှိသေးတယ် …
အီးတုံးဆီမှာ ပြန်သင်အုန်းမှပဲ … တစ်ရွက်ကနေ နှစ်ရွက် (ငါးထောင်တန်) ခွာနည်းလေးများတတ်ရင် သင်ချင်လို့ပါ …
ကြောင်အစာကျွေးနည်းတော့ သိထားချင်တယ် အဟိ…. ဦးကြောင်တို့ အိမ်လာလည်ရင် ကျွေးဖို့လေ…
ငါးထောင်တန် နှစ်ရွက်ခွာနည်းသင်ပေးလိုက်လို့ .. မဝေ အဖမ်းခံနေရပါဦးမယ် အဟီး :D
မနောရေ.. ကြောင်အစာကျွေးနည်းကတော့ လွယ်လွန်းလို့ … ကိုယ်တိုင်လာသင်စရာမလိုပဲ အင်တာနက်ထဲနေပို့ချလိုက်ပါတယ် ဟဲဟဲ … ။
ကြောင်စာထုပ်ကိုယူပြီး … အိတ်ဖွင့်ကာ ကြောင်ရှေ့ ချပေးလိုက်ပါ … သူ့ဘာသာသူငြိမ်ငြိမ်လေးစားပါလိမ့်မယ် … မစားတော့ပါက ဗိုက်ဝသည်ဟုယူဆပြီး ကြောင်စာထုပ်ပြန်သိမ်းပါ … တစ်နေ့ ငါးခါလောက်လုပ်ပေးပါက တစ်လပြည့်လျှင် ကျွမ်းကျင်စွာ တတ်မြောက်လာပြီး လက်တဖက်တည်းဖြင့် … ကြောင်စာထုတ်ဖွင့်နိုင်ပေးတော့မည်
ဒါဆို ဦးကြောင်ကြီးကို အရင်ကျွေးကြည့်မယ်နော်။ ရော့ စား …. အယ် မစားတော့ဘူးလား ဗိုက်ပြည့်ပြီထင်တယ် မကုန်ခင် ပြန်သိမ်းထားလိုက်မှ… ရော့ ရေသောက်များများ… မဆိုးဘူး နည်းနည်းတော့ ကျွေးတတ်လာပြီ။ သူ့ဘာသာ ယူစားမှာစိုးလို့ ဗီဒိုထဲ ထည့်သိမ်းထားတယ်သိလား ညီမလေး…..
အစ်မရေ မင်္ဂလာဆောင်ရာသီနဲ့ အမှီတင်ပေးလိုက်တာပေါ့
ဒါပေမယ့် ပန်းတွေကိုတကယ်လိုချင်တဲ့သူတွေ အတွက်ရော
လိပ်စာလေး ဘာလေးပါ ရေးပေးဦးမှပေါ့ ………..
ပန်းပွင့်တွေက အသေးမျိုးတွေ ညီမလေးရဲ့ လိုချင်ရင် လာယူလေ။ ခု အခက်တွေ အကုန်ပွင့်ကုန်ပြီ နှင်းဆီတွေကတော့ ကြွေတောင် ကြွေနေပြီ။ ကစ်မီကွိတွေလည်း အစုံရှိတယ်။
ပန်းတွေတော့ ပွင့်ကုန်ပြီတဲ့ အပျိုကြီး မနောကော စန်းပွင့်ပြီလား ဟိဟိ… (လူမသိ သူမသိ တီးတိုးမေးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည် ဖတ်မိသူများ မသိချင်ယောင်ဆောင်နေကြပါ)
မျက်လုံးကို လက်နှင့်ကွယ်လိုက်သည် …
မနောကလည်း ပြန်ဖြေပါတယ် …. ( ဆူးတင်ထားတဲ့ ငိုလိုက်ရယ်လိုက် ကလေးမျက်နှာလေးနဲ့ )
မကြာမီ လာမည် မျှော် …………. တဲ့ …. ။
ရှူးတိုးတိုး ဆူး သူများတွေ သိသွားဦးမယ်။ လူစုံမှ ရှင်းပြတော့မယ်နော် အဟိ
ပန်ကလေးတွေက သဘာဝကို သိလို့အပြိုင်အဆိုင်ပွင့်ကြပြီဆိုရင်……..
ပန်းကလေးတွေနဲ့ တူတဲ့ အပျိုကြီးတွေဟာလည်း …..လည်း……..လည်း……….(အက်ခိုးသံ)
ပန်းလေးတွေက လှလဲလှတယ် အမျိုးလဲစုံတယ်နော် … အစ်မ မနောရေ ပန်းမျိုးလေးတွေ လိုချင်ရင်ရော ပေးမှာလားဟင် …
ပန်းတွေက လှတယ်နော် ။ ပန်းစိုက်တဲ့ မနောကလည်း လှမှာပဲ ။ မနောရေ မိန်းမတွေကိုပဲ ပန်းပေးတာလား ၊ ယောကျာ်းတွေကိုရော မပေးဘူးလား ။
(ကိုယ့်အတွက်မဟုတ်ပါဘူး တဆင့်ပြန်ရောင်းမလို့ :D :D )
ပေးထားပါတယ်နော်။ သင့်ချစ်သူအတွက်လို့လေ။ မနောကတော့ ပန်းတွေနဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်ပါရှင်။